INkosi yaMaBhaca uDiko ayisekho emhlabeni | Scrolla Izindaba
INkosi yaMaBhaca uDiko ayisekho emhlabeni
INdlunkulu yamaDiko ikuqinisekisile ukudlula emhlabeni kwenkosi ebizibiza ngeNkosi uThandisizwe Madzikane II Diko wesizwe saMaBhaca e-Mount Frere e-Eastern Cape.
UDiko, ophinde abe ngumyeni wokhulumela uMengameli uCyril Ramaphosa, uKhusela Diko, ushonele esibhedlela i-East London ngemuva kokugula isikhashana izolo.
Abadala emndenini bashiye isigodlo esigodini sase-eNcunteni namhlanje ekuseni bebheke e-East London njengoba uKhusela Diko kulindeleke ukuthi isidumbu sakhe sisuke ngendiza ePitoli siye-East London ukuyoba nomndeni.
“INgonyama uMadzikane II Diko ushone ntambama ngeSonto mhla zingama-21 kuNhlolanja e-East London kulandela ukugula isikhashana,” kusho okhulumela umndeni uLumko Mtimde.
“Isizwe samaBhaca kanye nomndeni wasebukhosini basazama ukwamukela ukulahlekelwa ngubaba wabo othandekayo, indodana kanye nomyeni.”
UMtimde uthe, bazokwenza ezinye izimemezelo uma umbuso usuqedile ngamalungiselelo omngcwabo.
UDiko ubebandakanyeka kwithenda yezigidi ezingama-R140 zokuhlinzeka ngezinto zokuzivikela (ama-PPE) ngowe-2020.
Unkosikazi wakhe ophinde abe okhulumela umengameli umisiwe emsebenzini njengoba oKlebe bephenya ngethenda.
Le thenda iphinde yathinta nalowo owayenguNgqongqoshe wezeMpilo e-Gauteng, uBandile Masuku nowakwakhe uLoyiso Masuku asebephelelwe yimisebenzi.
Ngesikhathi uDiko ethi ukuzibandakanya kwakhe kumathenda ebhizinisi kuzozuzisa abantu baMaBhaca, iqembu elaziwa njengabazukulu beNkosi uMadzikane, ubaba ongumsunguli wesizwe saMaBhaca lithi la mathenda ebenzelwe ukuzicebisa.
UMnyango Wezindaba Zomdabu e-Eastern Cape wakuphika ukuthi uyinkosi wathi abantu baMaBhaca bayisizwe nje futhi abakaze babe ngabasebukhosini ngakho-ke abanankosi.
Ngokomlando abantu baMaBhaca bayiqembu elahlubuka ebukhosini bamaZulu elashiya indawo yase-Stanger eyayiholwa yiNkosi uMadzikane lazozinza e-Mount Frere e-Eastern Cape.